front | Kayin State Government Office
Kayin State Government Office
မူလသို႕ကရင်ပြည်နယ်ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကရင်ပြည်နယ် ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံကရင်ပြည်နယ် မြေပုံဒေသန္တရ အချက်အလက်များရိုးရာပွဲတော်များဓာတ်ပုံများစက်မှုဇုန်ကဏ္ဍသတင်းများအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်ဆက်သွယ်ရန် . ကရင်ပြည်နယ် သတင်းများ
ဘားအံမြို့တွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်အကြတ်နေ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ
ဘားအံ - ဧပြီ(၁၅)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆-ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆုတ်(၁၂)ရက်၊ ဧပြီ(၁၅) ရက်နေ့ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အကြတ်နေ့တွင် ဘားအံမြို့၊ နာရီစင်အနီးရှိ ဗဟို မဏ္ဍပ်၊ ဘားအံတပ်နယ်မိသားစုနှင့် မြိုင်ကလေးတပ်နယ်မိသားစုမဏ္ဍပ်၊ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များတွင် ဖျော်ဖြေရေးယိမ်းအကများဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်စွာရေပက်ကစား ကြကြောင်း သိရသည်။
ဘားအံမြို့တွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ဆုပေးပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲကျင်းပ
ဘားအံ - ဧပြီ(၁၆)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အတက်နေ့ နောက်ဆုံးနေ့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြီးနောက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုမဏ္ဍပ်၌ ယိမ်းအဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များမှ သင်္ကြန်သီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြပြီး ဧပြီ(၁၆)ရက်နေ့ ညနေ(၀၆၃၀) နာရီအချိန်တွင် ဆုပေးပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဘားအံမြို့တွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်အကျနေ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ
ဘားအံ - ဧပြီ(၁၄)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၆-ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆုတ်(၁၁)ရက်၊ ဧပြီ(၁၄) ရက်နေ့ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးမဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်အကျနေ့တွင် ဘားအံမြို့၊ နာရီစင်အနီးရှိ ဗဟို မဏ္ဍပ်နှင့် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အသီးသီးရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ်များတွင် ဖျော်ဖြေရေးယိမ်းအကများဖျော်ဖြေ ခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်စွာရေပက်ကစားကြကြောင်း သိရသည်။
Kayin State isastate of Myanmar.The capital city is Hpa-an also called Pa-An. The relief of Kayin State is mountainous with the Dawna Range running along the state inaNNW - SSE direction and the southern end of the Karen Hills in the Northwest
အလှပစုံလင် ပြည်နယ်တစ်ခွင် ဓာတ်ပုံများ
Kayin Beautiful Places
www.kayinstate.gov.mm Navigate to.....
©2014-2015 by Kayan State Government. Myanmar. All rights reserved